Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi Ama-Tom Davies Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
Kuqala, igama lakhe langempela ngu “Thomas“. Sikunikeza isembozo esigcwele seTom Davies Childhood Indaba, i-Biography, amaqiniso womndeni, abazali, ukuPhila kwasekuqaleni kanye neminye imicimbi ephambili kusukela lapho ayeseyingane kuya lapho ethandwa khona.
Indaba kaTom Davies yobuntwana- Bheka impilo yakhe yasekuqaleni futhi avuke. Isikweletu: SportsdotNet, Twitter kanye SkySports
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi uDavies ungomunye wabadlali abamaphakathi bebhola eliphakathi ebholeni lamaNgisi. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu ye-Tom Davies 'Biography ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka okunye, ake siqale ngokuqala ngesisekelo sakhe solwazi seWiki nethebula lokuqukethwe ngaphambi kwendaba ephelele.
Amaqiniso we-Tom Davies Biography (Imibuzo)
Igama eligcwele: Thomas Davies (Igama Langempela)
Usuku lokuzalwa: 30 kaJuni 1998
Indawo yokuzalwa: ILiverpool, eNgilandi
Ubudala: 21 (Kusukela ngoFebhuwari 2020)
Indawo akhulela kuyo: I-West Derby (East of Liverpool, England)
Igama Labazali: UDaine Davies (Umama) noTony Davies (uBaba)
Izakwethu: U-Liam Davies (Umfowethu Omdala)
I-Favorite Music Band: Amakhosi KaLeon
Ukudla okuthandayo: I-Pesto pasta noshizi we-parmesan.
Abangane abathandanayo: I-Dominic Calvert-Lewin
Ukuphakama: I-5 no-11 ku (1.80 m)
Isikhundla sokudlala: Umaphakathi maphakathi
IMfundo yebhola lakuqala: Ibhola lezikole kanye neTranmere Rovers
UTom Davies ' Indaba Yengane:
Indaba kaTom Davies Ubuntwana- Bheka umbono ocacile wezithombe zakhe zobuntwana. Isikweletu: FPCP-BlogSpot
Ukuqala, igama lakhe eligcwele liyi UTom “Thomas” Davies. UTom wazalwa ngosuku lwe-30 kuJuni 1998 kunina uDaine Davies (umphathi wezinwele) nobaba wakhe, uTony Davies (isisebenzi sikahulumeni) edolobheni laseLiverpool. Inkanyezi yasekhaya ekhulele eceleni komfowabo omdala uLiam futhi bendawonye, ​​bakhuliswa ngabazali babo eWest Derby. Uma ngabe ubungazi?… I-West Derby iyindawo engaphansi kwesicebi empumalanga yeLiverpool, eNgilandi.
Isizinda Somndeni SikaTom Davies:
Umndeni kaTom Davies ungowesizwe samaLiverpool esizalelwa eNgilandi esikhuluma ulimi lwesiNgisi. UMerseyside owazalelwa maphakathi nendawo ungumndeni wakhe odabuka eLiverpool, idolobha laseMelika elidumile lasolwandle enyakatho nentshonalanga yeNgilandi. Yidolobha elinamaqoqo amahle kakhulu weminyuziyamu eYurophu. Futhi, bekungokokuqala ukuba ngumnikazi wesitimela sokuqala sabagibeli emhlabeni.
UTom Davies wakhulela emndenini osezingeni eliphakathi nendawo, enamalungu amaningi omndeni wakhe ahlala edolobhaneni laseLiverpool eWest Derby. Ukuba nomama owayesebenza indawo yokulungisa izinwele kanye nobaba owayengumlingisi osezingeni eliphakathi nendawo kusho ukuthi bobabili abazali bakaTom Davies babekhululekile.
UTom Davies ' Ukuphila Kwasekuqaleni Ngebhola Nemfundo:
Ngesikhathi esemncane, abazali bakaTom Davies bambhalisa esikoleni sendawo saseMerseyside, esikhuthaza abafundi babo ukuthi babambe iqhaza emncintiswaneni webhola lesikole. Ngokuya kwe- I-Telegraph, omncane uTom (osesithombeni ngezansi) wayengumfundi okhanyayo, owayepasa kahle kakhulu ezibalo nesayensi.
UThomas omncane wadlala ibhola esikoleni, ngesikhathi lapho izikole zaseLiverpool zazinenkinga ngezifundo zeqembu ezazithatha abafundi bazo abahle kakhulu. Isikweletu: FYC
Ngaleso sikhathi, abazali bakaTom Davies babenombono wokuthi indodana yabo akufanele ihlehlise imfundo yayo ngebhola. Bobabili uDaine noTony babefuna ukuthi uTom omncane afinyelele ezingeni leNyuvesi. Ngeshwa, izinto azihambanga njengoba bebefisa ukungabongi kusiphetho.
Umalume wethonya uTom Davies 'wayenaye:
Noma ngenkathi imfundo ibanjelwe ibaluleke kakhulu, uthando lukaTom lwebhola lwaludlondlobala ngenxa yenkuthazo evela kumuntu oyedwa. Akusikho okunye ngaphandle kokuthiumalume wakhe- Alan". Uthi bewazi?… Izinhlobo zebhola futhi zisebenza emndenini kaTom Davies ngomalume wakhe odumile, U-Alan Whittle. Alan (efanekiselwa ngezansi) uTom ofana naye ngokwebala wadlalela i-Everton neCrystal Palace ngawo-1970.
Hlangana noMalume kaTom Davies, u-Alan Whittle- Ucabangani ngokubukeka kwabo? ISikweletu: I-Twitter
U-Alan Whittle wasiza uTom Davies omncane ukuba abe amandla okubalwa ebholeni lezikole laseMerseyside. Kude nesikole, UDavies uthathe ikusasa lakhe esandleni sakhe njengoba wayevame ukwenza amakhono akhe emikhakheni yebhola lasekhaya eWest Derby.
UTom Davies ' Impilo Yokunakekela Kwasekuqaleni:
Ithalente lebhola likaDavies laqhamuka ngesikhathi sokungaboni ngaso linye phakathi kwezinhlangano zebhola kanye nezinhlelo zebhola lezikole zeMerseyside. Ngaleso sikhathi, izinhlelo zesikole zeMerseyside zazidumaza amathalente abo aqhamukayo ekuhlanganyeleni nezifundo zebhola. Lokhu kufike ngoba babevame ukuzizwa bekhethekile futhi behlukanisiwe.
UDavies omncane wathinteka ngoba wayenethemba lokujoyina i-academy futhi ngasikhathi sinye, wabamba iqhaza ebholeni lesikole. Kwakungenziwa okukodwa kuphela kuye, kungaba ukuthi wajoyina i-academy noma waqhubeka nebhola lesikole. Ekugcineni, abazali bakaTom Davies bamvumela ukuthi akhethe ukuphuma ebholeni lesikole ukuze ajoyine iTranmere Rovers academy eseLiverpool.
I-Tom Davies 'Biography- Indaba Yakhe Yodumo:
Ukuqonda isifiso somfana wabo sokudlala ibhola ukuze aziphilise, amalungu omndeni kaTom Davies ikakhulukazi umalume wakhe wenza konke okusemandleni ukusekela izifiso zakhe. Ngesikhathi eTranmere Rovers, uTom omncane wakhula waba -nobuhlakani whiz kid. Isitayela sakhe sokudlala sakhanga i-Everton football academy, enye yamakilabhu amabili amakhulu esiNgisi avela eLiverpool.
Ngonyaka we-2009 eneminyaka engu-11 ubudala, uTom wayeseligcinile igama lakhe ohlwini lwabalingisi bakaToche ngemuva kwecala eliyimpumelelo neqembu. Okufanekiselwe ngezansi, kwakuyisikhathi esijabulisayo senjabulo yena namalungu omndeni wakhe.
UTom osemncane futhi ojabulayo ngonyaka ka-2009- Unyaka ajoyine i-Everton. Isikweletu: FPCP-Blogspot
Iqiniso li, tlapha akubanga yimpumelelo ubusuku bonke e-Everton academy. UDavies wayethandwa kakhulu ngenxa yokuvuthwa kwakhe kanye nobuholi ayenabo. Uthi bewazi?… Isimo sakhe nendlela yakhe yokudlala sambona futhi ebizwa eqenjini lesizwe laseNgilandi U16 ngonyaka ka-2013. Njengoba bekulindelekile, uDavies uqhubeke nokukhuphuka ezinhlwini zezwe lonke, waba ngukaputeni wentsha yase-England lapho kuqhubeka lokho.
I-Tom Davies 'Biography- Indaba Yakhe Yokudumela:
Kusukela ngesikhathi uDavies ethumba ubusha baseNgilandi, inqubekela phambili yakhe ibilokhu iqinile amathemba okuthi uzodlula ngaphansi kukaRoberto Martinez othathe izintambo UDavid Moyes. Ngesizini ka-2014 kuya ku-15, wanyuselwa kwabangaphansi kweminyaka engama-21.
Ekupheleni kwesizini, wasayina inkontileka yakhe yokuqala yobungcweti, umzuzu wenjabulo kumalume wakhe, abazali kanye namalungu omndeni. Ifomu elihlaba umxhwele likaTom Davies neqembu lika-U21 le-Everton lamvuza ngemfanelo yakhe yokuqala yePremier League ngumphathi uRoberto Martínez.
Lona osemusha, ngenxa yobuhlakani bakhe basemgwaqweni kanye nemiphetho emibi yebhola lezingane zesikole ayisekwanga ngokushesha. NgeSonto mhlaka 15 kuJanawari 2017 uhlala usuku olubalulekile kuTom Davies Biography angasoze wayikhohlwa. Kwakuwusuku afeza ngalo iphupho lakhe lobuntwana ngokushaya igoli lakhe lokuqala lobuchwepheshe e-Everton bebhekene neManchester City.
Efanekiselwe ngezansi, uDavies ukhombise ukuzithoba okukhulu ngemuva kokumunca ngenhliziyo ibhola phezu kwe-onrushing Claudio Bravo ukungashayi inhloso yakhe yokuqala ephezulu. Ukusebenza kwakhe kuleyo nyanga kwamtholela iJanuwari PFA Fans 'Player of the Month kanye neYouth Player of the Season.
Ukubukwa kwalowo mzuzu ongalibalekiyo uThomas uthole igoli lakhe lokuqala njengomdlali ophakeme. IZIKWELETI: Izikhathi kanye neDailyMail
Masinyane phambili esikhathini sokubhala uTom Davies Biography, singasho ngokuqiniseka ukuthi impilo yakhe isishintshile. Ngokuqinisekile akayena umgcini webhola lezinyawo futhi uguqukele ekubeni yinsizwa efunwayo. UTom uqhubeke nokumela ikilabhu yakhe ayithandayo (i-Everton) amahlandla angama-74 ngaphambi kokuzalwa kwakhe kwama-21.
Ngaphandle kokungabaza, thina balandeli bebhola sisethubeni lokubona omunye umdlalo wama-midfield uqhakaza indlela yakhe engena kwithalente lomhlaba wonke phambi kwamehlo ethu. UTom Davies ungomunye wabahamba phambili phakathi komugqa wokukhiqiza ongapheli wabadlali abasemaphakathi bephuma eNgilandi. Abanye, njengoba sithi, manje ngumlando.
Ngubani uTom Davies ' Ntombi?
Ngokukhuphuka kwakhe ebudaleni nasebuntofontofo, kuqinisekile ukuthi abanye abalandeli baka-Everton nabase-England kumele babecabanga ukuthi intombi kaTom Davies kungenzeka ukuthi ingubani. Noma ngabe ushadile, unonkosikazi nezingane. Iqiniso liwukuthi, akukho ukuphika iqiniso lokuthi ukubukeka okuhle kukaTom kwakungeke kumenze U-Lister zezinto zokwakha intombi nentokazi ezingaba khona. Njengoba UFilie Coutinho.
Abalandeli be-Everton ne-England babuzile- Ngubani uTom Davies Ukuqomisana? Ingabe unayo intombi? noma unkosikazi ?. Isikweletu: IG
Ngemuva kokusesha kaningana nge-inthanethi, sifinyelele ekuqapheleni ukuthi uTom Davies kungenzeka angashadi (ngesikhathi sokubhalwa).
UTom Davies ' Impilo Yakho:
Ukwazi impilo kaTom Davies. Isikweletu: I-Instagram
David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo bonke bane-mojo yangempela ngenkathi abanye abadlali bebhola abenzi ngandlela thile (hhayi kabi UDanny Drinkwater!). UTom Davies uyindoda eyodwa efakazela umhlaba ukuthi- Akudingeki ube yinkanyezi enkulu ukuze uphole kakhulu.
Noma ene-Skateboards yakhe, izinwele ezinde, izingubo zomvini, ukubukeka okuxakile, ubuntu bukaTom ku-pitch busalungiswa. UTom Davies uyisidididi kwinkolelo yomphakathi ebanzi ngokweqile (i-Stereotype) ngokubukeka kwebhola elisezingeni eliphezulu nekhono labo lokuba ngabaholi. Noma ngokubukeka kwakhe okuxakile, owethu uTom, amahlandla amaningi waba ngumholi kulolulwazi. Uthi bewazi?… UTom Davies uthwetshiwe, bobabili abasha baseNgilandi kanye neqembu eliphakeme lase-Everton.
Ekugcineni, empilweni yomuntu kaTom Davies, umdlali wasemaphakathi maphakathi nomuntu ozizwa ekhululekile kakhulu ngendlela yakhe. Akuthandi ukuthonywa abanye abantu. UTom ukholelwa ukuthi kudingeka akwenze kahle lokho akwenzayo esikhundleni sokulandela lokho abanye abantu (isibonelo; labo abamfuna egqoke amasheya amade futhi agunde izinwele zakhe) funa ayenze.
UTom Davies ' Indlela yokuphila:
Ukwazi Tom Tomies Indlela Yokuphila off the pitch. Isikweletu: I-Instagram
Ukwazi indlela yokuphila kaTom Davies bekuzokusiza uthole isithombe esiphelele sempilo yakhe. Ukuqala phansi, uzovuma nathi ukuthi uyikho tungumdlali webhola opholile kunabo bonke emhlabeni jikelele. Njengasikhathi sokubhala, uDavies akaphili impilo yobukhazikhazi ibonakala kalula ngezimoto ezinamakhaza, izindlu ezinkulu (izindlu) njll.
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, isikhathi sikaTom yize ebaluleke kakhulu kunevelu kanye nenani lemakethe usekhetha ukushayela ibhayisekili eyenziwe ngokwezifiso njengemoto yakhe. Lokhu kuwuphawu lwendlela yakhe yokuphila ngokuthobeka. UTom akafihli iqiniso lokuthi uyayisekela iFC Barcelona noma njengomdlali we-Everton. Uthanda ikhonsoli ye-PlayStation, eyodwa adlala ngayo I-Dominic Calvert-Lewin (umngani wakhe omkhulu).
UTom Davies ' Impilo Yomndeni:
Wonke umuntu eLiverpool uyathanda uma othile ovela edolobheni enza kahle, ngakho-ke akuwona umndeni kaTom Davies kuphela oziqhenyayo ngezinto azifezile. Abantu abavela edolobheni laseLiverpool bayathinteka lapho bebona ezabo zenza kahle. Izibonelo zakamuva yilezi; UJohn Lundstram futhi UChris Wilder abahamba phambili ebholeni lesiNgisi. Kulesi sigaba, sizosikhanyisela kakhulu ngokuphila komndeni, sibheke omunye wabazali bakaTom Davies- umamakhe.
Okuningi Ngokuphathelene noTom Davies 'Mum:
UDaine Davies ungumdwebi wezinwele odumile eLiverpool kanye ne-super mum kaTom Davies. UDaine uluhlobo lukamama olunamathela kakhulu endodaneni yakhe. UDavies utshele iDaily Mail ukuthi emuva esifundweni sakhe, umamakhe akanandaba nokugcina indawo yakhe yokwenza izinwele ivaliwe ukuze ayise eFinch Farm (Indawo yokuqeqesha i-Everton FC). Lokhu kwenzeke yize ayengumdlali ovuthiwe kepha wayengakaphasisi ukuhlolwa kwakhe kokushayela. Engxoxweni, uDavies wake washo lokhu ngomama wakhe;
"Umama wami ungiletha njalo ekuseni futhi ungilahle, ”Kusho uDavies, enobuso obukhulu. Lapho ebuzwa ukuthi uhlekiswa yini ngabalingani beqembu lakhe lamaTofi, uphendule wathi: “Yebo, kepha angiboni lutho olungalungile ngalo!"
Okuningi Ngobaba bakaTom Davies:
UTony Davies ungubaba opholile kaTom. Unguhlobo lukababa oluthokozela ukuba nendodana yakhe uDavies eduze kwakhe lapho bobabili bebukela khona imidlalo yakhe ndawonye. Ngokuya kwe- Telegraph, UDavies wake wathi ngemuva kwegoli lakhe lokuqala lomsebenzi ophakeme, waya ekhaya lomndeni wakhe ukuyobukela lo mdlalo nogogo wakhe omkhulu (uTony). Bobabili ubaba nendodana bakhe ubudlelwano obuhle, obumiselwe ukuhlala njalo.
Mayelana Nomfowethu kaTom Davies- uLiam:
Abazali bakaTom Davies babengenaye njengoba eyingane yabo kuphela. Umgcini webhola okhulayo waseNgilandi unomfowethu omkhulu ohamba ngegama U-Liam Davies. Umfowabo kaTom Davies njengaye naye wangena kwezemidlalo. Ngokuya kweWikipedia, uLiam ungumdlali webhola owedlalela i-Curzon Ashton. Omunye umbiko uthi uLiam ubuye abe ngumpheki ohlonishayo opheka zonke izinhlobo zokudla ngokuthanda kwakhe okuyi-pesto pasta noshizi we-parmesan.
Mayelana noMalume kaTom Davies:
Hlangana noMalume kaTom Davies, u-Alan Whittle- Ucabangani ngokubukeka kwabo?
U-Alan Whittle ungumalume kaTom, lowo esathi unesibopho sokudelela umsebenzi kaDavies, umenze ngcono njengomdlali. Ngokufanelekile, uTom Davies ngumshana walowo owayengumdlali we-Everton owabonakala amahlandla angama-74 kwekilabhu phakathi kuka-1967 no-1972.
UTom Davies ' Amaqiniso:
Kulesi sigaba seTom Davies Biography, sizokwethula amaqiniso omuntu angenasisekelo ngeLiverpool azalwe kanye nomgcini webhola waseNtshonalanga uDerby.
Iqiniso # 1- uTom Davies Ukwehlukaniswa Kwemholo Ngemizuzwana:
Ngekota yokuqala ka-2019, lo mdlali wasesiswini usayine isivumelwano ne-Everton, equkethe umholo owedlule we- $ 1,293,684 (Isigidi sePhawundi) ngonyaka. Ukuqongelela iholo likaTom Davies kutholwe ngemizuzwana ngemizuzwana, umzuzu, ihora, usuku, njll,… sinokulandelayo;
Amaholo weholo likaTom Davies 'ePound (£)
Uholo luka-Tom Davies 'lomholo kwi-Euro (€)
Imivuzo yemiholo kaTom Davies Ngonyaka £ 1,293,684 € 1,500,000
Amaholo kaMholo kaTom Davies Nganyanga Yonke £ 107,807 € 125,000
Iholo likaTom Davies 'Mholo Ngamaviki £ 26,294 € 30,488
Imivuzo kaTom Davies Ngosuku £ 3,534 € 4,098
Iholo likaTom Davies 'Mholo Ngamahora Ngamunye £ 147 € 171
Ukuhola kweMholo kaTom Davies Ngomzuzu £ 2.45 € 2.85
Imivuzo kaTom Davies yokuhola ngomzuzwana £ 0.04 € 0.05
Lokhu kungakanani imali eyenziwe nguTom Davies selokhu waqala ukubuka leli khasi.
Uma lokho okubonayo ngenhla kusafunda (0), kusho ukuthi ubheka ikhasi le-AMP. Manje Chofoza LAPHA ukubona amaholo akhe enyuswa ngemizuzwana. Uthi bewazi?… Indoda ejwayelekile e-UK idinga ukusebenza okungenani iminyaka engu-3.6 ukuze ithole £ 107,807, inani uTom Davies alithola ngenyanga eyodwa kuphela.
Iqiniso # 2- Mayelana ne-Tom Davies Izinwele:
Isizathu ngemuva kwezinwele zikaTom Davies. Isikweletu: I-SB-Nation, iZimbo ne-EvertonFC
Ngaphandle kokungabaza, izinwele zakhe ezinde ze-blonde zimenza aqashelwe ngokushesha kwe-pitch. Iqiniso lokuthi amalungu omndeni kaTom Davies axhasa izinwele zakhe bake banikeza umqeqeshi wakhe wobusha zonke izinhlamvu ukuthi azenze izigqila. Lokhu kungenxa yokuthi wayecabanga ukuthi izinwele zivela kwaDaine, umamakhe, nezinwele zezinwele. UDavid Unsworth [umqeqeshi we-Everton Under-23s] wayevame ukunika uDavies imithambo yezinkuni ngezinwele zakhe, wayehlala emtshela ukuthi anqunywe. Lapho ebuzwa ngezinwele zakhe, uTom wake wathi;
“Ngiqale ukukhulisa izinwele zami eminyakeni embalwa emuva, ngabe sengiyilahla. Kungazelelwe, ngiqale ukuyilahlekela, ngakho-ke kufanele ngiyikhulise. ”
Umdlali webhola ophambili ku-Premier League wathi ngenkathi evuma okuxakayo ukuthi umama wakhe, uDiane, ungumkhandi wezinwele.
Iqiniso # 3- Kungani uTom Davies egqoka amasheya amafushane:
Siyakutshela ukuthi kungani umdlali wasesiswini ophakathi egqoka amasheya amafushane?. Isikweletu: Zimbo
Ukusuka ezinweleni zakhe kuya ku-chin ongashintshiwe bese uyiswa esitokisini sakhe esifushane, uTom Dama-avies abamba umcabango wesidlali sebhola esinamahhala. Uthi bewazi?… Isikole sikaTom esidala, amasokisi agqoke kancane sisho ukuthi akaziwa malume wakhe u-Alan Whittle. Yebo ukwenza lokho ukuhlonipha umalume u-Alan Whittle owake wagqoka amasheya amafushane ngesikhathi sakhe e-Everton. Kuze kube manje, abaningi ababheki uTom kuphela, kepha abanye ababambi bebhola bathanda Jack Grealish atypical ngenxa yokuzimisela kwabo ukufaka amasokisi kumasokisi we-shin.
Iqiniso # 5- Tom Davies Izilinganiso zeFIFA:
UDavies eneminyaka engama-21 (kusukela ngoFebhu 2020) inamandla okuba ngomunye wabadlali abahamba phambili abangamaNgisi kuFIFA. Umdlali wasesiswini omaphakathi unesilinganiso esingahle sibe yiFIFA sama-82, simenza athenge ngokuqinisekile abathandi bemodi yomsebenzi weFIFA.
Umdlali wasesiswini ophakathi unamandla amahle eFIFA, impela ngekusasa. Isikweletu: SoFIFA
Iqiniso # 6- Tom Davies Tattoos:
Tom ngesikhathi sokubhala akakholelwa ku Isiko le-tattoo elithandwa kakhulu emhlabeni wanamuhla wezemidlalo. Kufanekiselwa ngezansi, umdlali wasesiswini akadingi ama-ink emzimbeni wakhe ophezulu nangaphansi ukubonisa inkolo yakhe, izinto azithandayo noma amalungu omndeni.
UThomas wethu uqobo akakholelwa (ngesikhathi sokubhala) akakholelwa kumaTattoos. Isikweletu: I-Instagram
Iqiniso # 7- Tom Davies Inkolo:
Igama langempela likaTom DaviesThomas”Igama elivela embhalweni weBhayibheli. Ukuba naleli gama kusho ukuthi kungenzeka ukuthi abazali bakaTom Davies bangamaKristu. Ngesikhathi sokubhala, asikho isibonakaliso sokuthi uTom mkhulu enkolweni. Noma kunjalo, sizokuvuselela ngokushesha nje lapho kuba khona ubufakazi besithombe obukhombisa umkhuba wakhe wenkolo yobuKristu.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Tom Davies yethu Yobuntwana Indaba Yezindaba Zasekhaya ye-Untold Biography. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Moise Kean Ingane Yomntwana Plus Plus Untold Biography Facts
Indaba ka-Dominic Calvert-Lewin yobuntwana Plus Untold Biography Facts
I-Ross Barkley Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Meyi 24, 2020
Usuku olushintshiwe: Septhemba 18, 2020
U-Gylfi Sigurdsson Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: ngoFebhuwari 17, 2018